Showing १-१० of १८१ items.
सुनसरीका सांसद राईले हस्ताक्षर नगरेको उल्लेख
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूले हस्ताक्षर नगरेको भन्दै सुनसरी क्षेत्र नं. १ का माननीय जयकुमार राईले उल्लेख गरेका छन् । आफू पार्टी विभाजनको पक्षमा नरहेको भन्दै उनले आफ्नो फेसबुक वालमा प्रष्ट पारेका छन् । माधव नेपाल,भिम रावल,रामकुमारी झाँक्री र झपट रावलले मात्र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको र अरु सबै किर्ते हस्ताक्षर किर्ते रहेको पनि स्रोतले उल्लेख गरेको छ । यसैगरी नेकपा एमालेका तीन नेताहरु गोकर्ण विष्ट , सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराईले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरुको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको बताएका छन् ।
प्रकाशित मितिः जेठ ७, २०७८